Radio Don Bosco - Foibe FAFIALA : mandray anjara amin'ny fandrakofan'ala any Sofia
Foibe FAFIALA : mandray anjara amin'ny fandrakofan'ala any Sofia
Naseho ny : 13 mey 2022
Manohy ny sehatr'asany any amin'ny distrikan'i Bealalana Faritra Sofia amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny Foibe FAFIALA manana ny foiben-toerany eny Ambohimangakely, distrikan'Antananarivo-Avaradrano. Tetik'asa tanterahana mandritra ity taona ity ary kaominina roa no hanaovana izany...
Velaran-tany 200 Ha mahery no horakofan'ny Fafiala ala ao amin'ireo Fokontany dimy ao amin'ireo Kaominina roa ao Bealalana ireo. Maherin'ny 300.000 ny zana-kazo ho vokarina, ankohatra ny sehatr'asa hafa atao momba izany, toa ny fanofanana ny tantsaha.
Sehatr'asa taorian'ny fahavitan'izy ireo ny tetik'asa fambolen-kazo niarahana tamin'ny PLAE andiany fahadimy tao amin'ny distrikan'Ambanja ary tao amin'ny distrikan'Antsohihy kosa niarahana tamin'ny PLAE andiany fahaefatra.
Hankalaza ny faha 30 taona nijoroany ny FAFIALA. Hisy ny varavarana misokatra hanokafana izany hatao eny amin'ny foiben-toerany eny Ambohimangakely manomboka ny talata 17 mey 2022 izao hanehoana ireo teknika fampandrosoana voizin'ireo eny ambanivohitra nandritra izay 30 taona izay.
[Miara-dalana] Alatsinainy 23 mey 2022
♦ Fanamby lehibe ho an'ny Diôsezin'i Moramanga ny fanatonana ny vahoaka amin'ny fanatanterahana ny Sinaody... ♦ Notsofin-drano tamin'ny sabotsy 21 mey 2022 ny "podium" ao Soavimbahoaka, ho fahatsiarovana an'i Fr. Raphaël-Louis Rafiringa... ♦ Marihana ny 22 hatramin'ny 29 mey 2022 ny fahafito taonan'ny Ansiklika "Laudato Si'", nosoratan'ny Papa François...